Nweta Wii site na Noobie! | Martech Zone
Ezigbo enyi m, Patric… aka Mazi Noobie, na-enyefe Nintendo Wii! Patric abụwo ezigbo enyi nke blọọgụ m n'afọ gara aga ma anyị na ndị enyi anyị nwere ọtụtụ iko kọfị Egwuregwu Bean.
Dika m nwere obi uto dika m nwetara ihe ohuru ma obu ihe omuma ohuru, odi nkpa ka m cheta na ezigbo uzo nke ndi na eleta na saiti m amaghi ihe m na ekwu. Ebe ahụ ka Maazi Noobie batara! Ma ị nwere nsogbu ịghọta TiVo, ihe nchọgharị weebụ, ma ọ bụ ekwentị kachasị ọhụrụ, o nwere ike ịbụ na Maazị Noobie edeela ma ọ bụ mepụta pọdkastị banyere ya. Ọ bụ nnukwu nwoke na-arụ ọrụ dị mkpa!
Nyere aka kwalite onyinye Patric
Mgbe Patric gwara m na ọ na-enyefe Wii, Agwara m ya na achọrọ m ịde blọgụ banyere ya. Maka nkwupụta zuru ezu, agbanyeghị, enwerekwa ihe mkpali nye m! Maazị Noobie na-enyekwa iPod Nano na iPod Shuffle!
Ọ bụrụ na ntinye aka kachasị na saịtị gị ị meriri 8GB iPod Nano.
Ọ bụrụ na onye mmeri nke Nintendo Wii si na saịtị gị, ị merie 1GB iPod Shuffle.
Noobie bụ ebe ị na-aga mmụta mmụta na teknụzụ. Ma ị chọrọ inweta ihe kachasị mma na ngwaọrụ ọhụụ ma ọ bụ mụta ụzọ ọhụrụ iji mee ka teknụzụ rụọ ọrụ maka gị, anyị nwere ike ịnyere aka. Noobie na-enye ozi a pụrụ ịtụkwasị obi na ebumnobi na gburugburu ebe nchekwa na nghọta. Gaa otu ihe omume, gụọ otu isiokwu, na-agagharị na blog, ma ọ bụ hazie oge ọzụzụ.
Shouldnye Kwesịrị Enterbanye?
N'ezie onye ọ bụla chọrọ Wii kwesịrị ịbanye iji merie. Na mgbakwunye, agbanyeghị, jide n'aka na ị ga-agwa ndị enyi gị na ndị ezinụlọ gị okwu ahụ na Noobie. Ọbụna ma ọ bụrụ na ọ bụ ndị ọrụ gị n'ọfịs gị, Patric nwere ike ịpụta wee mee ụfọdụ na nchịkwa saịtị. Ọ bụ nnukwu mmadụ nwere nnukwu ndị na-eso ya na ọbụna obi ka ukwuu maka inyere ndị gbara anyị gburugburu aka ka ụjọ na-atụ anyị, kama ịnwe ọ excitedụ, gbasara teknụzụ.
Tinye ugbu a maka ohere gị iji merie Nintendo Wii si Noobie!
Tags: automatticpịa site naMkpa nke pịaMobile na Mbadamba ụrọakwụ ụgwọakwụ ụgwọ retweetsakwụ ụgwọ nkekọrịtaakwụ ụgwọ ụgwọakụnchebe oziụlọ ahịastevekremerOnye isi ahianwa agbọghọọrụ onwe onye web